ကိုယ်တို့အကြောင်း | အဆိုပါဒုက္ခသည်စင်တာတွင်အွန်လိုင်းဒုက္ခသည်များအတွက်အခမဲ့ဝက်ဆိုက် | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း
အဆိုပါ RCO ဆိုတာဘာလဲ?
အဆိုပါဒုက္ခသည်စင်တာတွင်အွန်လိုင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူဖန်တီး website တစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
ဒါဟာတစ်မှတ်တိုင်ဖြစ်ပါသည်, အရင်းမြစ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်အသစ်ရောက်ရှိလာသောအပေါငျးတို့သကဒီမှာ America မှာသူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်အောင်မြင်သောအသက်တာကိုတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်ရတာဟာပြည့်စုံက်ဘ်ဆိုက်.
အကြောင်းအရာပြန်လည်နေရာချထားရေးဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူဖြင့်တာဝန်ယူထားသောခဲ့ပြီး ESL ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကန့်သတ်တရားဝင်ပညာရေးနှင့်အတူသူတို့အဘို့ကျမ်းစာ၌လာသည်ကား. Programs ကိုထပ်မံ automated နှင့်လက်စွဲဘာသာပြန်ချက်များကိုနှင့်ဘက်စုံသင်ယူမှုနည်းစနစ်များတွင်နောက်ဆုံးပေါ်နှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့်တိုးမြှင့်နေကြသည်. ဒါကြောင့်လိုအပ်တဲ့အခါမှာကျနော်တို့ဘယ်မှာထောက်ခံမှုပေးမိုဘိုင်းနည်းပညာ၏ပြန့်ပွားခြင်းနှင့်အင်တာနက်ရဲ့စွမ်းအားကိုအသုံးနှင့်.
အဆိုပါ RCO ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါသည်.
အဆိုပါဒုက္ခသည်စင်တာတွင်အွန်လိုင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက်သာပြည့်စုံအွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်. ကျနော်တို့တိုင်းပြည်နယ်အတွက်အသစ်ရောက်ရှိလာသောအသုံးပြုသောနှင့်တိုင်းပြည်အနှံ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးအေဂျင်စီများနှင့်အခြား Non-အမြတ်အစွန်းနှင့်အတူမိတ်ဖက်များနေကြတယ်. ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်ပြီးသားသူတို့ကိုမလိုအပ်သောသူတို့အားသူတို့ကိုပိုပြီးနားလည်လွယ်ခြင်းနှင့်လက်လှမ်းအောင်နေဖြင့်တည်ရှိနေသည့်အထောက်အပံ့ On-The-မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်ဖြည့်.
အဆိုပါ RCO ကတာဝန်ထမ်းဆောင်လူဦးရေအားဖြင့်ပဲ့ထိန်းနေသည်.
အဆိုပါဒုက္ခသည်စင်တာမှအွန်လိုင်းကကူညီရန်ကြိုးစားနေသည်ရပ်ရွာနှင့်အတူရငျးနှီးအပြန်အလှန်ဖြစ်ပါသည်. ပိုများသောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်ထက်ဝက်ကျော်ကိုအောင်မြင်စွာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အခြေချကြသူဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေဟာ. ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်များကိုတီထွင်ခဲ့ကြခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ်မျက်နှာသစ်အသိုင်းအဝိုင်းဆီက input တစ်ခုကြားမှာလုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်တိုးတက်နေကြသည်, အဆိုပါ RCO ရဲ့ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာနည်းပညာနှင့်အကြံပေးကောင်စီအပါအဝင်. ယူတိုင်းအရေးယူအသစ်ရောက်ရှိလာသောမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အကောင်းဆုံးထောက်ခံသူများဖြစ်ကြသောယုံကြည်ချက်အပေါ်မှာသက်ရောက်အချက်ကို.
အဆိုပါ RCO စီးပွားရေးအရအကျိုးရှိစွာဖြစ်ပါသည်.
ဒုက္ခသည်စင်တာတွင်အွန်လိုင်း၏အစီအစဉ်များကိုအလွန်တရာထိရောက်သောကုန်ကျနေကြသည်. ကျနော်တို့အင်တာနက်၏တန်ခိုးနှင့်လက်လှမ်းမမီကိုသုံးပါ, လက်ကိုင်နည်းပညာ၏ပြန့်ပွားနဲ့ပေါင်းစပ်, အပြတ်အသတ်အရွယ်မှာဖြစ်ကြောင်းအစီအစဉ်များကိုဖန်တီးရန်. ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူသန်းပေါင်းများစွာကိုကူညီသည်နှင့်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအားကောင်းလာစေရန်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးကို, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီမိုကရေစီ.